Fampandrosoana manontolo ny rehetra | NewsMada
Fampandrosoana manontolo ny rehetra
“Tsy azo boriborina fotsiny amin’ny fomba tsotra amin’ny fitomboan’ny harinkarena ny fivoaran’ny firenena iray”, hoy ny Papa Fransoa tamin’ireo mpitondra fanjakana tamin’iny fitsidihana apostolika natao teto Madagasikara, araka ny nampahatsiahivin’ny Md Paoly VI. Raha tiana ny hisian’ny fivoarana marina, tsy maintsy ho feno izy: mampivoatra ny rehetra ary ny olona manontolo.
Mby aiza izany amin’izao? Raha ny nisy sy niainana hatramin’izay, anisan’ny nampiaka-peo ny eny anivon’ny faritra sy ny faritany, ohatra, ny hisian’ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Misy hatrany tsinona ny zanak’Ikalahafa amin’ny fampandrosoana… mbola mandringa. Eny, na ny fisitrahana ny tamberim-bidy amin’ny fitrandrahana ny harena amin’izany ihany aza, ohatra, tsy hita be ihany.
Tsy mbola ny vahoaka any ifotony no tena misitraka ny tombontsoa mivantana amin’ny hoe fampandrosoana amin’ny trosa be baben’ny taranaka, fa ny mpanera sy mpanelanelana amin’ny fanaovana tetikasa, fivoriana atrikasa… Manginy fotsiny ny fiadiana tsenambaro-panjakana amin’izany. Hahagaga raha fampiadiana tarehimarika no be, fa tsy misy inona firy mipaka any amin’ny vahoaka?
Vao mainka mafy sy sarotra aza ny fampandrosoana ny olona manontolo na ny maha olona. Anisan’izany, ohatra, ny tsy fanajana sy fampiharan-dalàna na eo amin’ny mpitondra na ny vahoaka: ny teny nomena, ny zon’olombelona, ny fahamarinana… Tsy mahagaga ny fisian’ny tsimatimanota, ny fanodinkodinam-bolam-bahoaka, ny fitsaram-bahoaka, ny kolikoly, ny fandrobana harem-pirenena…
Inona no hatao hisian’ny fivoarana marina sy feno? Fanararaotra izao fifidianana kaominaly izao, mba tena hiainga any ifotony ny hoe fampandrosoana. Ho araka izay tena hetahetam-bahoaka, izay tena hahasoa ny vahoaka, ho amin’ny tombontsoa iombonana sy mampiombona ny vahoaka… Ny olom-pirenena, mandinika sy misafidy, fa misy ny manana fandaharanasa azo tanterahina amin’izany.